Mamorona mpanjifa Ultimate Experience. Martech Zone
Alahady, Septambra 9, 2012 Alahady, Septambra 9, 2012 Douglas Karr
Na dia mitohy mivoatra aza ny Internet ary efa am-polotaona vitsivitsy no niasana dia nahay tsara an'izao tontolo izao ny fomba hamoronana traikefa mpanjifa mahafinaritra. Ny fitoviana eo amin'ny fomba itondranao ny mpanjifa mivantana sy ny fomba itondranao azy ireo amin'ny Internet dia mitovitovy ihany rehefa manandrana mamorona ny traikefan'ny mpanjifa farany indrindra ianao.
Infographic nataon'i Monetate: Manantena ny fifandraisan-davitra amin'ny Internet misy ifandraisany amin'ny marika ireo mpanjifa. Ho an'ny orinasa maro, ny fahaizana manome traikefa mpanjifa tsara indrindra amin'ireo mpitsidika ny tranonkalany dia mijanona ho olana. Jereo ny fomba handikana traikefa an-tserasera ivelan'ny Internet amin'ity infographic ity.
Tags: ab testinglasibatra fitondran-tenageotargetingfanandramana marobelasibatraFikendrena ara-teknolojiany fiasa izanyFikendrena miorina amin'ny toetrandrotranonkala fanatsaranafitsapana tranonkala
Inona no mety amin'ny fizarana ara-tsosialy